गर्भावस्था को 33 33 हप्ता। सन्तुलित पोषणको लागि हेर्नुहोस्।
गर्भावस्थाको अवधि, <33 हप्तादेखि सुरू गर्दै, यो लामो समयको अन्त्यमा एक विचित्र ब्यान्ड मानिन्छ र अलार्मले भरिन्छ, साथै दूरीहरूको आनन्दित। सामान्यतया, अग्रणी जिनिकाशास्त्रीले योजनाबद्ध बनाउँदछ - यस अवधिको लागि तेस्रो - अल्ट्रासाउन्ड अवलोकन; र यदि परीक्षाको बेला, कुनै विचलनहरू पत्ता लागेन, सास फेर्दै दिइएका छन् र खुशीसाथ भविष्यमा मेहनत गर्दछन्: "अब तपाईंको बच्चा पहिले नै बढ्नेछ।"
भविष्यको आमा अब आराम गर्न र अनावश्यक जन्मको डर हुन सक्छ। बच्चाको विकासमा सब भन्दा महत्त्वपूर्ण प्रक्रियाहरू पहिले नै पछाडि छन्। उसको वजन2किलोग्राम पुगेको छ, र अझ बढी। यस अवधिमा ईचेनोचेका 400 देखि 45 45 सेन्टीमिटरसम्म भिन्न हुन सक्छ। यस प्यारामिटरहरू अनुसार "33 वटा हप्ता" को अवधिको अवधिको अवधिमा विनियोजन गरिएको छ र यो समयमा सामान्य गतिविधिहरूको लागि तयारी गरिएको छ।
गर्भावस्थाको हप्तामा महिलाको भावना: सामान्य र नयाँ
आशा नगर्नुहोस् कि एक महिलाको शारीरिक र भावनात्मक संवेदनाहरू "समाप्त ब्यान्ड अघि" अन्तिम पालो "पछि। नवजातसँगको लामो-प्रतीक्षावात बैठकको आनन्दित घटना नजिकै आउँदैछ, महिला बढ्दो गुरुत्वाकर्षण गर्दैछ, लगाउनका लागि months महिनासम्म राखिन्छ। यो अभिव्यक्त को बारे मा विपरित हुन सक्छ:
STXTIONES 33 हप्ताको साथ, विषाक्तसिटीको संकेतहरू अब गर्भवती (यस मानिणुको बारेमा) कुरा गरौं - हामी तल कुरा गरौं)। यद्यपि, आराम गर्न सायद सायद सम्भव छ, किनकि तिनीहरूलाई बदल्नको लागि कुनै पनि सहज सनसनी छैन। अर्थात्:
लेखको लेखक पाँच बच्चाहरूको आमा हो। यद्यपि मेरो सबै गर्भावस्थाको प्रायः सबै तुलनात्मक रूपमा राम्रोसँग अगाडि बढे, र मैले एक सक्रिय जीवनशैली नेतृत्व गरें, लगभग सबैको अन्तमा मैले महसुस गरें जस्तो म हावाको कमी महसुस गरें। दुई वा तीन पटक लगभग बन्द र भरत कोठामा चेतना गुमाउँदै, किनकि मैले तातो गर्मीलाई जन्म दिएँ।
वर्णन गरिएको सम्वेदनहरू स्पष्ट छन्, किनकि महिलालाई frinks3 हप्तामा दुई जना शाब्दिक रूपमा दुईको लागि जितेको छ, र यो आफ्नै शरीरहरू बृद्धि गर्न असमर्थ छन्। मुख्य कुरा भनेको तपाईंको व्यक्तिगत सुविधाहरू जान्नु र बुझ्नु हो, र आफैलाई जोखिमपूर्ण परिस्थितिहरूमा नराख्नुहोस्। उदाहरण को लागी, मेरो स्थिति मा, म भ्रष्ट परिसर, अधिक trevinging र कडा कपडाबाट बच्न प्रयास गरें।
<< p> आदर्श यदि बच्चा हेडपोइन्ट स्थितिमा रोकिन्छ - त्यो हो, टाउको तल, त्यसबेलादेखि यसले यसलाई बचाउँदछ। एक पेल्विक पूर्वावलोकन संग (त्यो हो, यो सिजेरियन सेक्सन होईन) यदि तपाइँ कार्यको सामना गर्न सक्षम हुनुहुन्छ भने, बेवकूफहरूले नबोर र यस मामिला हटाउन सक्षम छन्। Cesorare भागमा निरपेक्ष संकेत बच्चाको ट्रान्सभर्स स्थिति हो, जुन अझै प्रायः हुँदैन।
<< P> यो समय गर्भावस्थाको who 33 हप्ता गर्भावस्थाको लागि समय हो जसको मतलब यो हो कि months महिनाको पहिलो हप्ता शुरू भयो। बच्चाको साथ पहिलो भेट गर्नु अघि थोरै छोडियो। अब बच्चा जन्मको लागि आफूलाई तयार पार्न समय हो, खरीदहरू बनाउनुहोस्, बच्चाहरूलाई सुसज्जित पार्नुहोस्।
अधिक आराम गर्नुहोस्, अनन्त चिन्ताले सँधै लाभ गर्दैन। आफ्ना आफन्तहरूसँग कुराकानी गर्नु राम्रो हो, राम्रो भावनाहरू प्राप्त गर्नुहोस्।
<< p> बच्चाको लागि सबै कुरा पनि बढ्न र तौल प्राप्त गर्न जारी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण बाँकी छ। लगभग सबै जसो जीवहरू प्रणाली पूर्ण रूपमा काम गर्छन्। त्यसोभए, मुटुले रगत पम्प गर्यो, लगभग 120-1-1600 शटहरू प्रति मिनेट बनाउँदछ। एउटा सासको लागि लिन कोशिस गर्दै, बच्चाले धेरै अम्नियोटिक तरल पदार्थको संख्या निगराउँछिन्, र यस समयमा किडनीले यसलाई मूत्रमा रूपान्तरण गर्दछ। यो तरल पदार्थ स्वचालित रूपमा शरीरबाट लिइएको हो, झूट बिना।
एन्डोपोरिन प्रणालीलाई नियन्त्रित गर्न जारी राख्न जारी छ। तिनीहरू पनि शरीरको अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यहरू उत्तर दिन्छन् जसले बच्चाको अवस्थालाई असर गर्दछ।
सबै भ्रुण आन्दोलनहरू रिफ्लेक्स हुन्, तिनीहरूले दिमागलाई नियन्त्रणमा राख्छन्। यसको शरीर र मांसपेशीहरूद्वारा सचेतपूर्वक प्रबन्ध गर्नुहोस्, पज्जल डेलिभरी पछि केही समय हुनेछ। एक नियमको रूपमा, यसले धेरै वर्ष लिन्छ।
शरीरमा कुनै प्राकृतिक बन्दुक कुनै प्राकृतिक बन्दूक छैन, र suthute विविध फ्याट लेयर धेरै गाढा भएको छ। टाउकोको पहिलो कपाल बाहिर आए, तिनीहरू कम भंगुर हुन सक्छन्, तर नरम रहनेछ।
<< p> क्रम्ब्सको सब भन्दा सरल र हल्का मांसपेशीहरू अझै सक्रिय छैनन्। यस चरणमा बच्चाको वजन दुई किलोग्राम भन्दा बढी हुन सक्छ। यो डरलाग्दो छैन, आदर्श भाँचिएको छैन, किनकि बच्चाहरूको जन्ममा फरक फरक गतिमा तौल। सामान्यतया 1-20-20 ग्राम प्रति दिन थप गरिन्छ।
<< p> सम्भवतः, बच्चा बच्चा जन्माउने को सही स्थितिमा निहित हुन्छ। अर्थात्, हेड डाउन, छातीमा जाल, र क्रस गरिएको खुट्टा, ह्यान्डल। तर फल थकित हुनुपर्ने जस्तो भए पनि। हामीले पट्टीलाई त्याग्नुपर्नेछ। किनभने उसले उसलाई चल्नबाट रोक्छ, र अझ अघि बढ्छ। तर यदि बच्चा झूट बोल्छ भने, यसले बच्चा जन्माउनु अघि सही स्थितिमा राख्न मद्दत गर्दछ।
तथ्यका कारण ध्यानपूर्वक घटाइएको तथ्यका कारण ध्यानपूर्वक कम गरिएको छ, यस अवधिमा बच्चाहरूले यस अवधिमा जन्मेका छन् प्रायः श्वासप्रश्वासको कष्ट सिन्ड्रोमको कष्ट हो।
यसको मुख्य अभिव्यक्तिहरू 300 मा प्रति मिनेट सास फेर्न, साइनोसिस र छालाको पाल्टोमा छन्। केहि केसहरूमा, पानी फोम मुखबाट देखिन्छ।
उपचारले पक्कारी सर्फक्लकको परिचयमा सम्पन्न भयो र बच्चाको बच्चाको परिचय र बच्चाको बच्चाको परिचय सकेसम्म चाँडो सुरु हुनुपर्दछ।
गर्भावस्थाको <33 33 33 को समय बच्चाले तथाकथित प्रतिस्थापन (स्थिति) मा आमामा पेटमा लिनुपर्दछ र, यसैले प्रकाशको उपस्थितिको लागि तयारी गर्नुपर्दछ। त्यहाँ धेरै प्रकारका पूर्वावलोकन छन्:
सबै भन्दा राम्रो टाउको हो, किनकि यो स्थितिमा यो स्थितिमा छ कि बच्चाले उदार मार्गहरू पार गर्यो र थप चोटहरू वा आमाको कारणले।
गर्भावस्था हप्ता दुख्ने पीडा
"प्राकृतिक" तेस्रो त्रैमासिकको अन्त्यमा दुखाइ मात्र निरन्तर प्रस्तुत हुँदैन, तर लगभग हरेक दिन तीव्र पनि गर्दछ।
यो बच्चाको द्रव्यमान, आमाको सेटको द्रव्यमान र महिला शरीरको जन्म र महिला शरीरको लागि बच्चा जन्माउनको तयारीको कारण हो।
यो गर्न तपाईले आफ्नो डाक्टरलाई उनीहरूको बारेमा सूचित गर्नुपर्दछ र तपाइँका लागि उपयुक्त समाधानहरू फेला पार्नु पर्दछ (ब्यान्डजेशन, पिउने मोड, वा पिउने मोड, आदि लगाउनुहोस्)
गर्भावस्था हप्ताको बखत भविष्यको शरीरमा परिवर्तनहरू
गर्भावस्थाको 33 घण्टामा आमालाई के हुन्छ? यदि भावी आमाको आमाले हेमोग्लोबिन स्तरमा कमी भएको छ भने, यो अन्तिम म्याद द्वारा सामान्य हुनुपर्दछ। पेटमा 33 33 हप्तामा 33 33 वसन्त बढ्दै जान्छ, जसले छाती र श्रोणिमा असुविधा र पीडा सिर्जना गर्दछ। तपाईं आफ्नो भविष्यको बच्चाको लागि प्रवृत्तिलाई स्पष्टसँग महसुस गर्न सक्नुहुन्छ।
<< p> 33 हप्ताको गर्भावस्थाको nember सम्म गर्भावस्थाको नावेनबाट, गर्जनको नावेनबाट 1 13 देखि 12 किलोग्रामसम्म, गर्भाशयको नावस 1 13 सेन्टीमिटबाट हो।
गर्भावस्थाको हप्ता: तपाईंको बच्चा
हामी विश्व अन्वेषण गर्दछौं। यस समयमा, बच्चाले उसको वरिपरिको तरल संसारलाई देख्न सक्दछ, ऊ आफैंले आफ्नो औंला र उसको हातमा औंलाको स्वाद लिन र आफ्नो मुटुको धडकन महसुस गरेको महसुस गर्दछ। स्वादशास्त्र प्रसारण गर्न Annumonded शेल मा कुनै हावा छैन, तर यदि यो भएको भए बच्चाले वातावरणको गन्ध महसुस गर्न सक्दछ।
स्मार्ट टाउको। मस्तिष्कको द्रुत बृद्धिका कारण, तपाईंको बच्चाको टाउकोको सोधिएको परिधि लगभग 1..3 सेन्टीमिटर एक हप्तामा मात्र बढ्यो।
मेनूको ट्र्याक राख्नुहोस्। तपाईंको पोषण अनुगमन गर्न यो धेरै महत्त्वपूर्ण छ। तपाईंको बच्चाको आवश्यकताहरू प्रोटीन र अर्को हप्ताहरूमा फ्याटहरूमा धेरै उच्च छ, त्यसैले सन्तुलित पोषणको ट्र्याक राख्नुहोस्। तपाईंको बच्चाको बृद्धि अब -4 44--46 सेमी हो, यसले 1.8 किलोग्राम भन्दा बढी तौल गर्दछ, र आउँदो सात हप्तासम्म, बच्चाले दोब्बर गर्नुपर्छ।
गर्भावस्थाको <33 33. फल को वजन 1 00 00-20000 g हो, -42-4--43 सेन्टीमिटरको पूर्ण बृद्धि। भ्रुणको हड्डीहरूको विनाश लगभग पूर्ण हुन्छ, तर खोपडीले अझै पनि हड्डी र कार्टिलाज जडानहरू समावेश गर्दछ। आमा समय-समयमा भ्रुणको आन्दोलनलाई विचार गर्न समय-समयमा महत्त्वपूर्ण छ र फ्याट एसिडहरूको साथ तिनीहरूको आहार संतृप्ति। भाग्यशाली सिन्ड्रोम कडा परिश्रम बिना पनि हुन सक्छ।
suthuteout फ्याट लेयर भनेको जारी रहन्छ, र शरीरभरका मूल बन्दुकहरू गायब हुन्छन्। टाउकोमा कपाल थोरै ताज छ, तर अझै पनि तिनीहरू नरम र प्रशस्त छन्।
केही अंगहरू अझै संलग्न छैनन्। प्रकाश बच्चाहरू एक्लै छन्। तर डायाफ्रागम उठ्छ र कम कम, यो पनि एक प्रशिक्षण हो। गर्भमा रहेको बच्चालाई हेर्नुहोस्, त्यहाँ अँध्यारो छ, तर आँखाका मांसपेशीहरू र पलकहरू उनीहरूको गतिविधिका लागि तयार छन्।
<< p> केहि बच्चाहरूले तीस-तेस्रो किलोग्राम भन्दा बढी तौल गर्छन्। तौल दर उल्लंघन गरिएको छैन, किनकि नरबर्म प्यारामिटरहरूमा फरक छन्। जुम्ल्याहा सायद यति अग्लो र तौल सजिलो छैन। यहाँ सबै व्यक्तिगत रूपमा छ। औसतमा, भ्रुणले दिनहुँ 1 15-25 ग्राम वजनमा थप गर्दछ।
<< p> यस अवधिमा धेरै बच्चाहरूले आगामी डेलिभरीको लागि इष्टतम स्थिति लिइरहेका छन्: टाउको तल। खुट्टा र चकहरू पार गरिन्छ। तर यदि डाक्टरले अर्को पूर्वावलोकन स्थापना गरे, त्यहाँ चिन्ता गर्न केही छैन। केवल पट्टी लगाउनुहोस्। उसले तपाईंलाई मद्दत गर्दछ, तपाईंको पेटलाई समर्थन गर्दछ, तर भ्रुणलाई सार्दछ र बच्चालाई कसरी आवश्यक छ भन्नेमा बच्चालाई रोक्दैन।
हड्डी र भ्रूण कार्टिलेजले क्याल्सियमको खर्चमा उनीहरूको खनिजलाई निरन्तरता दियो, जुन आमाको खानासँग आउँदछ। यद्यपि, बच्चाहरूको खोपडीले साझेदारी गर्दैन, यसमा हल्का र लचिलो कार्टिलिज जडानहरू यस प्रकारको जारी रहनेछ। किन यस्तो हुन्छ?
धेरै चाँडै नै बच्चाले आमाको गर्भ पथबाट जानुपर्नेछ (अवश्य पनि, यदि Cesarare भाग योजना गरिएको छैन भने)। टाउको बच्चाको शरीरको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा हो। प्यासेजलाई सहयोग पुर्याउन, बच्चाको जन्म को वर्षाको हड्डीहरू सारियो र बच्चाहरूको टाउकोको व्यास कम गर्नुहोस्।
यो जान्न उपयोगी छ। स्पष्ट हड्डीहरू पहिले नै एक वर्ष पुरानो बच्चाहरूमा कडा हुँदै गएका छन्। बच्चाहरूको शीर्षमा यो मौकाले भरिएको छैन त्यहाँ स्प्रिंग्स छ - सानो ठाउँहरू जहाँ कुनै हड्डी ऊतक र नाडी महसुस भएको छ।
गर्भावस्थाको तेस्रो त्रैमासिक जारी छ। भविष्यको आमा, जबकि पेटको हित र आयामहरू अझै पनि अनुमति दिन्छ, यो तीन चीजको बारेमा सोच्नको लागि लायक छ: बच्चाको छनोट, शोकको तयारीको तयारी र शयनकक्षको तयारी हो। थप रूपमा, केही समय तैको तयारीका लागि जीवनसाथी र ठूला बच्चाहरूलाई तयार पार्न आवश्यक छ (कम्तिमा अस्पतालमा रहनको लागि र पहिलो हप्ता पछि पछि उनीहरूले सबै घरेलु समस्याहरू समाधान गर्नुपर्नेछ।
गर्भावस्था हप्तामा फलको साथ के हुन्छ
<< p> यसबाट भ्रुणको वजन 1.9 किलोग्रामसम्म पुग्छ, वृद्धि 422--43 सेन्टीमिटर छ। त्यहाँ बच्चाहरू र अधिक छन्। ठिक छ, यदि आमा एकैचोटि धेरै बच्चाहरूको लागि पर्खिरहनुभएको छ भने, उनीहरूका प्यारामिटरहरू औसत भन्दा कम हुन सक्छन्। तसर्थ, यो वजन र बढ्दो क्लामब्सको बारेमा चिन्ता गर्नु लायक छैन, मुख्य कुरा यो हो कि यी सूचकहरू हप्तादेखि हप्तामा बढ्छ।
मा र पट्टिका हप्ताहरू, भविष्यमा फल नभई फाटो कम सक्रिय भएको छ, तर आफ्नै विस्मयकारी छन्। यो एकदम सामान्य छ, उसले गर्भाशयमा थोरै मात्र ठाउँ छोड्यो। यो crumb को धेरैजसो समय आउँछ, खुट्टा, र ह्यान्डल र चिन - छातीमा। यदि बच्चा बदल्न वा तान्न चाहन्छ भने, महिलाको पेट एकमा चप्पलमा चप्पल गर्न थाल्छ, अन्यथा। अरक्षण आमाहरू पनि बुझ्न थाल्छन् जहाँ हेल बाहिर चढे, र क्याम वा ब्यारेल।
<< p> at 33 हप्तामा, बच्चाले गर्भाशय बाहिर जीवनको लागि तयारी गर्न जारी राख्छ। फोक्सोको सक्रिय रूपमा सरोजगार उत्पादन गर्दै छन्, त्यसैले यस समयमा जन्मेको बच्चाले स्वतन्त्र रूपमा सास लिन थाल्छ, तर क्वासुज प्रणाली अझै पनि अपरिपक्व छ।
फीटसको कलेजो र पोषण पूर्ण शक्तिमा काम गर्न तयार छन्, आन्द्राले वास्तविक खानाको लागि तयारी गर्न आवश्यक छ। यो लगभग अन्तिम चरणमा एक scooderine र प्रतिरक्षा प्रणाली पाकेको थियो, त्यहाँ त्यहाँ आधारभूत संरचना र मस्तिष्कको केन्द्रहरु गठन को प्रक्रियाहरु छन्।
भविष्यको आमाको हित, तौल को वजन
यी समस्याहरूको केही कारणहरू हराउनेछन् - 3-4--4 हप्तामा गर्भाशय तल झर्ने छ, त्यसैले फोक्सोमा यसको दबाब कम हुन्छ, तदनुसार यो सजिलो हुनेछ सास फेर्ने, हार्दबर्न र बेइचि asst कम अक्सर विचलित हुनेछ। अब सबै कुरा जुन तपाईंको स्वास्थ्यलाई सुधार गर्न बाँकी छ तपाईंको कल्याणलाई सुधार गर्न को लागी आफैंको ख्याल राख्नु, अझ बढी आराम गर्न, डाक्टरको सिफारिशहरू अनुसरण नगर्नुहोस्।
सुरक्षित रूपमा गर्भावस्था र सजिलैसँग जन्म दिनु र एक महिलाले आफ्नो वजन नियन्त्रण गर्नुपर्दछ। तेस्रो त्रैमालिकले 200-300 g को तेस्रो त्रैमासिक रूपमा इष्टतममा साप्ताहिक बृद्धि गर्दछ। बीस्केडले 33 33 हप्ताहरूलाई अत्यधिक खाद्य प्रयोग र लुकेका एडेमा हो, जुन GSTOSS को प्रारम्भिक चिन्ह हो। सामान्यतया, यस पदका लागि गर्भवतीले to देखि 12..5 किलोग्राम डायल गर्न सक्दछ।
गर्भाशयको पर्खालबाट अर्को एकल जैरिंग प्लेन्सा। यो दुबै सामान्य र कम राखिएको दुबै विभाजित गर्न सकिन्छ। एउटी आइमाईको लागि यो अवस्था खतरनाक भयो र भ्रुणको लागि, तीव्र र मृत्युसमेत। निम्न लक्षणहरूमा यो रोगशास्त्र शंका गर्न:
र अन्तमा तेस्रो कडा जटिलता, जुन भविष्यको आमा गर्भावस्थाको 33 33 मा पूर्वानुमान बच्चाको जन्म हो। तिनीहरूको संकेतहरू:
MOMS को शरीरमा परिवर्तनहरू र संवेदनहरू
गर्भावस्था अनि गर्भावस्था मर्मत महिलाको लागि शारीरिक रूपमा धेरै गाह्रो छ, भावनात्मक योजनामा। सबै सबै भन्दा उल्लेखनीय जानकारीहरू हुन्: लामो-चितुवा र जमघट, किशान्स र गृह मामिलामा हिंड्दै। सबै चैचारिटिस विवरण वर्णन ओह, सबै समस्याहरूको बाबजुद, त्यहाँ ठूलो खुशी छ, आफ्नो बच्चालाई उसको मुटुको मुटुको भावना महसुस गर्दै। प्रशिक्षार्थीहरू, पर्खिरहेका र पर्खने केटाहरूलाई भावनात्मक रूपमा महसुस गर्ने भावना गर्भावस्थाको सबैभन्दा उज्यालोपनाको रूपमा पूर्वानुमान गरिनेछ।
बेरीहरूको तार्किक समाजको लागि सर्तको किनारमा परिवर्तन हुन्छ। यो अधिक र बढी सम्भावना छ कि गर्भाशय "chamet": गलत झगडाको सहयोगमा बच्चालाई जन्मेकोमा धकेल्न तयारी गर्दैछ। बेल्ट छातीमा पीडादायी देखिन्छ, जसमा लक्षण तयारीको प्रक्रिया हुने छ।
अवलोकन गर्दा अनावश्यक, कमजोरी, चक्कर, सास फेर्छ। घाँसे बर्भरीबाट बच्न, तपाईंले दिनको दिन समायोजन गर्न आवश्यक छ, यसलाई दिनको आराम र पूर्ण-फ्लाइड निदा गर्नु पर्छ।
महिलाको मनोवैज्ञानिक स्ट्यान्ड अप 33stlorys inststors मा धेरै प्रतिरोधी छ। यो खास खास खास खास गरी श्रीमतीको नाममा जसको गर्भावस्था चुँकिएको छ। एक महान हजुरबुबाको अनुभव को लागी उन्नत बच्चा जन्म मा सामेल छ। लप्राफ्रोस गर्न महत्वपूर्ण छ, तर नर्सिंग व्यक्तिहरूसँग कुञ्जीहरूसँग कुञ्जीहरूसँग साझेदारी गर्न।
Lotissesures, जब गर्भावस्थाको 33 33 को 33 33 साल छ, "बढ्न" अब बढ "सक्दैन। केही समय पछि, उनले पेल्विक क्षेत्रमा सुरु गरे, डायाफ्रामको दबाब कमजोर र आमाले सास फेर्नेछ। त्यतिन्जेल, उनीसँग नतिजा हुनु छ जसको परिणाम छ, जुन भ्रुणको द्रुत बृद्धिको लागि हो।
गर्भावस्थाको << औं हप्तामा चुपचाप र शान्त हुँदै जान्छ, किनकि तपाईं छुट्टीमा जीवनको नयाँ तालमा अभ्यस्त हुनुहुन्छ, तपाईंको गोलाकार पेटी र ढिलो आन्दोलनहरू। । । गर्भावस्था हरेक महिलाको जीवनमा एक अद्वितीय अवधि हो। । ।
बुझ्नुहोस् कि दुई मुटुले तपाईंमा पिटहरू, तपाईंमा - दुई जीवन अविश्वसनीय, राम्रो, अद्वितीय छन्। । । भविष्यमा मातृत्वको आनन्दले तपाईंको मुटुलाई न्यानोपन र प्रेमको साथ भर्दछ।
बच्चाको वजन तराजूमा पुगेको छ -2किलोग्राम। बच्चाको पूर्ण बृद्धि 43 43 सेन्टीमिटर हो, र टाउकोबाट टेलबोनमा - करीव cm0 सेन्टीमिटर।
<< p> बच्चाको विकास जारी रहन्छ र प्रत्येक हप्ता बच्चाको उदयको लागि बढी तयार हुँदै गइरहेको छ, जहाँ तपाईं यसको लागि पर्खिरहनुभएको छ।
बच्चा विद्यार्थीहरूले पहिले नै प्रकाशलाई जवाफ दिन सक्षम छन्। बच्चाले पहिले नै बिभिन्न दिशामा आँखाले ध्यान दिन सक्दछ, र दृश्य ध्यान विकास पनि गर्दछ।
मिठो वा खट्टा? बच्चाको स्वादमा पहिले नै राम्रोसँग बोक्छ - यसमा यसले भाषामा निप्पल स्वाद मद्दत गर्दछ।
subcuteous फ्याट संकलन गर्न जारी छ। उहाँलाई धन्यवाद, बच्चाको अनुहार केही राउन्ड गरिएको छ - गाला देखा पर्दछ, र छालालाई स्मोट गर्दछ।
बच्चाको शरीर अझै बन्दुक र कच्चा लुब्रिन्टन्ट कभर गर्दछ। कान शेलहरू राख्नु सुरू हुन्छ, यद्यपि तिनीहरूको आकार अझै सानो छ। ह्यान्डलहरूमा औंलाहरू र खुट्टाहरूमा पहिले नै ग्रुवको साथ प्याक गरिएको छ - सार्वभौमिक छाला बान्की।
बच्चा अझै पनि सार्न र पछाडि जान सक्छ, यद्यपि यो पहिले नै उसलाई गाह्रो छ। डाक्टरको स्वागतमा बच्चाको स्थितिमा इरादा गर्नुहोस्, यो बच्चा जति सक्दो चाँडो टाउकोको स्थिति समाप्त हुने बित्तिकै चाहानुहुन्छ, किनकि यो बढ्नको लागि र अधिक गाह्रो हुन्छ।
यद्यपि बच्चा गति र अन्तरिक्षमा सीमित छ, यसले निरन्तर नयाँ कनेक्शन प्राप्त गर्ने कामहरू सिक्ने र मास्टर गरिरहेको छ। बच्चाले पहिले नै सबै कुरामा पोखिएको छ जुन नवजात कि नवजात नै चिच्याउन सक्षम हुनेछ, उसलाई अझै पनी थाहा छैन। बच्चा सुत्दछ, सुन्ने, नाटकहरू, हेर्नुहोस्, औंला बेकार छ ... र उसले सपनाको सपना देखाउनेछ - उसको आमाको जस्तै। यो विद्यार्थीहरूको द्रुत निद्राको चरित्रमा विद्यार्थीहरूको आवागमन द्वारा प्रमाणित हुन्छ।
गर्भावस्थाको 33 33 33. बच्चाको मुटुको ठूलो बढ्दछ, यो सबै एक ठूलो तीव्रता "पम्पहरू" को साथ। रक्त वाहिकाहरूको भित्ता गाढा हुन्छ, तिनीहरू पहिले नै संकुचित र विस्तार गर्न सक्दछन्।
यस हप्तामाबाट, मिर्गौलाले बच्चाले नीतिमा तपाईंले पेशाबमा तेलले हाइलाइट गर्दछ जुन बच्चाले नीतिमा तेलले हाइलाइट गर्दछ।
भविष्यको आमाको साथ के हुन्छ: सेन्सन्स
गर्भावस्थाको 33 घण्टा 33 घण्टा महिलाले महसुस गरे कि बच्चा भन्दा पहिलेको भन्दा बच्चा प्रायः सर्छ। सामान्यतया,2घण्टा भित्र, यसले लगभग 10 पटक धकेल्छ। यदि फलहरू2घण्टाको लागि सबैभन्दा कम अक्सर 10 पटक सार्दछ भने, तपाईंले AKuster-स्त्रीशास्त्रीलाई सन्दर्भित गर्नु आवश्यक छ। बच्चाको अवस्थाको आकलन गर्न, डाक्टरले अल्ट्रासाउन्ड र / वा हाँचाइककग्राफ (CTG) नियुक्त गर्न सक्दछ।
पेट। एडडोल स्तर 33 33 हप्ता द्वारा उच्च बिन्दुमा पुग्छ। भविष्यमा आमाको असुविधा हुन सक्छ, उनको हृदयसम्म र सास फेर्नुभयो। चाँडै, पेट तल झर्ने शुरू हुनेछ, र सबै अप्रिय अनुभूतिहरू आयोजना गरिनेछ।
BALL छाला अधिक र अधिक बच्चा छिटो तौल, र त्यसैले पेट धेरै चिसो हुन सक्छ: आमाले छालालाई नियमित रूपमा चिसो बनाउनु पर्छ। खुजली, सिंथेटिक र कडा कपडा लगाउन को लागी - यसले असुविधालाई सुदृढ पार्नेछ।
साझेदारी गर्नुहोस्, तीव्र आन्दोलनहरू बिना, पेटमा सुरक्षित हुनुपर्दछ र गुरुत्वाकर्षण केन्द्रको शिफ्टको कारणले (धेरै गर्भवती महिलाहरू खसेका छौं)। योजनाबद्ध रिसेप्शनमा, डाक्टरले बच्चाको मुटुको धडकन सुनेको पेटको परिधि मापन गर्दछ।
पीडा। गर्भावस्थाको अवधिमा वृद्धिको साथ, तल्लो पछाडि, sacrum र खुट्टाहरूमा दुखाइ, शरीरको वजन र गुरुत्वाकर्षण केन्द्रको पूर्वाग्रहको कारण। उठेको खुट्टाको साथ झूट बोलीमा दुखाइ कम गर्न सम्भव छ।
<< p> तपाईंले एक सुविधाजनक स्थितिमा पट्टि लगाउन र तपाईंको पछाडि निद्राबाट जोगिनु पर्छ। डिस्चार्जको साथ पेटको तलको पीडा समयपूर्व जन्मको संकेत हुन सक्छ, र तुच्छ कारण एम्बुलेन्स गर्न आवश्यक छ।
<< p> लगभग सबै भविष्यका आमाहरू बच्चाको चर्पहरूबाट दुखाइ महसुस गर्छन्: पेटका ठाउँहरू पहिले नै थोरै छन्, र यो प्यारेन्ट जीवमा मांसपेशीहरू र मांसपेशीहरू छन्। धेरै तनावपूर्ण छ।
पछि peops 33 हप्ता पेल्विक हड्डीहरू तोड्न थाल्छन्, जसले जालुकको क्षेत्रमा दुखाइ दिन्छ। अक्सर गर्भाशय स्वरमा आउँदछ, र पेटको फेदमा तान्ने पीडा हुन्छ - दुखाइ कम गर्नले पोज "बिरालाहरू" लाई मद्दत गर्दछ।
केही गर्भवती महिलाहरू ध्यान दिनुहोस् कि तिनीहरू सामान्यतया उनीहरूको खुट्टामा क्रम्पहरू देखा पर्दछन्। यो बेलुका वा रातमा अक्सर भइरहेको हुन्छ, यसलाई उठ्न जबरजस्ती हुन्छ।
âîÒ ई èÀëÀñü 33 íåååòòòòòññññññññññññññ Òûûüaüüüüüuüüò òóóóóòòòòòòòòòòòòòòîòòóóóóóóó म ìàûûûûààààèèèèèè AI मा üååååååååå Ææææææææææææææææææææææææûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûêêêê।
Â â âà ðà ðà ð å å å å ing onganeñ लेस
íîî - 33--3-3-3-3-3-3-3-33 --3- êûû ééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééééé ñ एनोज्युज ðëaüòåÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿÿ ðàagòòòòòìììììììììììììììì Î îhòòòòòòòòòòåååååååååãããããã'ititit।